Stamplia: Thenga noma Yakha Isifanekiso Sakho se-imeyili Kalula | Martech Zone
ULwesihlanu, July 10, 2015 Douglas Karr
Uma ufuna ugqozi lwesifanekiso sakho se-imeyili esilandelayo, ubheke ukuthenga isifanekiso se-imeyili ongasiguqula, noma ubheke nokwakha isifanekiso se-imeyili esiphendulayo kusuka ekuqaleni - ungabe usabheka I-Stamplia.
Banikela ngezincwadi zezincwadi ezingabizi kodwa ezinhle, ama-imeyili wokuthengiselana, kanye nezifanekiso ezikulungele ukwenziwa Magento, PrestaShop ezomnotho, Umkhankaso Wokumkhankaso or I-Mailchimp. Isifanekiso ngasinye se-imeyili sinekhasi lencazelo, izici, futhi lihlolwe kumathani amaningi amaklayenti.
Isakhi Sokwakha Isifanekiso se-imeyili Esabelayo
Umakhi wabo wokudonsa nokudonsa onamandla nakho kumnandi! Uma ngabe wake wakha ikhodi isifanekiso kusukela ekuqaleni, uyazi ukuthi kungaba nzima kanjani ukuqinisekisa ukuphendula ngenkathi ubheka okuhle kunqwaba yamakhasimende e-imeyili laphaya!
Nayi ividiyo ekhombisa ukuthi elula indlela ye- I-Stamplia Hudula bese uphonsa isihleli… futhi baze banikeze nezifanekiso ezi-5 ukuqala ukuze ungasebenzi kusukela ekuqaleni.
Tags: yakha isifanekiso se-imeyiliimeyiliumakhi wesifanekiso se-imeyiliizifanekiso ze-imeylistamplia